I-Scenic View Farm in the Endless Mountains of PA - I-Airbnb
I-Scenic View Farm in the Endless Mountains of PA
Wysox, Pennsylvania, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Kyle
U-Kyle Ungumbungazi ovelele
Eduze nokubukwa okuhle kwemvelo enhliziyweni ye-Endless Mountains of Northeastern PA. Uzothanda ukukwazi ukubalekela ukuphila okumatasa, ubone amahlamvu amahle ekwindla, izilwane zasendle, uthathe uhambo oluya endaweni emizileni enakekelwa futhi ubuke izinkanyezi ebusuku. Indlu nendawo ilungele izithandani, izihambi ezizihambela yedwa, abahambi bebhizinisi, imindeni (enezingane), kanye namaqembu amakhulu.
Izinja zamukelekile kufanele zibe nemvume kanye nenkokhelo encane engu-$40 inja ngayinye yokuhlanza okwengeziwe. Ubukhulu bezinja ezi-2
Ikhaya elivulekile lifinyeleleka ngokuphelele.
Igrill ne-propane iyatholakala (uma uphelelwa singakunikeza elinye ithangi le-propane)
Indlu igcwele amalineni engeziwe namathawula amaningi okugeza namathawula asekhishini. Ikhishi lihlome ngokuphelele ngamabhodwe, amapani, izinto zokupheka, izinto zokubhaka, izitsha, amapuleti, izitsha, i-blender, ibhodwe lokugezela, ibhodwe lekhofi (ikhofi lisefrijini) njll.
Isamba esincane sethishu yasendlini yangasese, ithawula lephepha, insipho yezitsha, insipho yokuwasha/isithambisi sendwangu, izikhwama zikadoti njll. sizonikezwa ukuze uqalise. Kukuwe ukuthi unikeze lezi zinto uma uphelelwa.
Kukhona umgodi womlilo ngaphandle nendawo yomlilo ngaphakathi. Sicela ulethe izihlalo/izihlalo zakho zendawo yokucima umlilo ngaphandle, sihlinzeka ngamabhentshi ezinkuni ambalwa. Singahlinzeka iqembu lakho ngezinkuni ezimbalwa noma eziningi ozidingayo ukuze uhlale ngo-$15- ukhokhelwe mathupha noma ungathenga izinkuni endaweni yethu yasendaweni ye-Tractor Supply (10min drive) ngo-$7/8 ukulayisha ingalo.
Izinja zivunyelwe kodwa ***ngemvume*** imali eyengeziwe engu-$40/Inja - ekhokhwa mathupha ukuze kuhlanzwe okwengeziwe kulabo abangase baqashe ngokungezwani nokudla
4.97 · 120 okushiwo abanye
CPA with love of outdoors.
Russ & Shawne-Anne
Ababungazi, uRussell kanye no-Shawne-Anne Hotaling basendaweni (indlu ehlukene) futhi bayakwazi ukusiza nganoma yiziphi izidingo ezifana nokuqalwa komlilo noma isifundo sokuthi ungaqala kanjani umlilo omkhulu! sinikeza ama-s'mores fixins
UKyle Ungumbungazi ovelele